နော်ဝေ တောင်ဖက်စွန်း Lindesnes သုို့ ခရီးဆက်ခြင်း... ~ Htet Aung Kyaw
7:14 AM Htet Aung Kyaw No comments
မြက်ခင်းပေါ်က ပလပ်စတစ်တဲထဲမှာ တညတာကုို sovepose ထဲ ကွေးပြီးတဲ့နောက် မနက် ၇ နာရီလောက်မှာ နုိုးလာပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ မုိုးမရွာပဲ နေသာနေတော့ လူကလည်း လန်းဆန်းလုို့။ ဒီနုိုင်ငံမှာက ပြင်ပရာသီဥတု အခြေအနေနဲ့ လူအတွင်း စိတ်တုိုက်ရုိုက်ဆက်စပ်နေသလား မသိပါ။ နေသာနေရင် အပြင်ထွက်ချင်စိတ်၊ ခရီးသွားချင်စိတ်တွေက သူ့အလုိုလုို ပေါ်လာလေ့ရှိပါတယ်။ မနက်စာ စားဖုို့ ပန်းခြံကနေ ကုိုဂျွန်မန်းတုို့အိမ်ကုို ပြန်။ ပြီးတော့ ဒီနေ့ ဘယ်ကုို ခရီးဆက်မလဲပေါ့...။
ကျနော်တုို့ခရီးစဉ်က ဒီပန်းခြံရယ်၊ ပြီးတော့ ထုိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ကရင်တော်လှန်ရေးနယ်မြေမှာတုန်းက သိခဲ့ဖူးတဲ့ ကရင်တုိုင်းရင်းသားအများစုရှိတဲ့ အနီးအနားက အုန်းမလီ (Ámli) မြို့ဆီ သွားလယ်ရေးမျှသာ။ ဒါပေမယ့် ဒီရောက်နေတုန်း ခရစ်စတန်ဆန်းဖက် သွားရအောင်၊ ကျနော်က အရင်တခေါက်ရောက်ဖူးပြီးဖြစ်ပေမယ့် ရဲဘော်ဒေါင်းက တခါမှမရောက်သေးဘူးဆုိုတော့ သွားသင့်တယ်ပေါ့။ မနက် ၉ နာရီလောက်မှာ ပန်းခြံဆီပြန်လာ၊ ပစည်းတွေသိမ်း၊ ရေကန်ထဲမှာ ရေကူးပြီးတဲ့နောက် ခရစ်စတန်ဆန်း ခရီးစဉ် စပါတယ်။
အဲဒီလုို ကားမောင်းနေရင်းကမှ ခရစ်စတန်ဆန်းသက်သက်က သိပ်မထူးဘူး၊ နော်ဝေနုိုင်ငံရဲ့ တောင်ဖက်အစွန်းဆုံးနေရာ Lindesnes- ကုို သွားရအောင်၊ ၂ နာရီကျော်ကျော်လေးပဲမောင်းရမယ်ဆုိုပြီး ကုိုကျော်စုိုးက အဆုိုပြုပါတယ်။ သွားပေါ့- ကျနော်တုို့က သွားချင် နေတဲ့လူတွေပဲ။ ဆုိုတော့... ခရစ်စတန်းစန်းကုို ခဏ၀င်၊ ကုိုကျော်စုိုးရဲ့ အိမ်မှာ ပစည်းတွေချပြီးတဲ့နောက် ခရီးဆက်ပါတယ်။
ခရီးမဆက်ခင် ခရစ်စတန်စန်းမြို့အကြောင်း နည်းနည်းပြောရမယ်ဆုိုရင် သိပ်လှတဲ့ ဆိပ်ကမ်းမြို့လေးပါ။ ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတုိုင်း ဒိန်းမတ်နုိုင်ငံက Hirtshals ဆိပ်ကမ်းဆီ သဘောင်္နဲ့ ၃ နာရီ မောင်းရင်ရောက်ပါတယ်။ (မြောက်ပုိုင်းခရီးစဉ်အတွင်းတွေ့ရတဲ့ ဥရောပတုိုက်သားအတော်များများဟာ ဒီလမ်းကြောင်းကနေ ကားတွေ ဆုိုင်ကယ်တွေ တင်ပြီး ၀င်လာကြပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆုို အဲဒီအချိန်အထိ ဆွီဒင်က နယ်စပ်ပိတ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်)။ တခါ ဒီမြို့မှာ လေဆိပ်လည်းရှိတဲ့အတွက် ကုန်းကြောင်းအပြင် ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းတွေလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ အဲဒီလေယာဉ်ကွင်းကို ကုိုကျော်စုိုးတုို့ အိမ်ကနေ လှပစွာ မြင်နေရပါတယ်။
တဖက်မှာ ပင်လယ်ရေပြင်ပြာပြာ၊ တဖက်က ထင်းရှုးတောအုပ်နဲ့ မြက်ခင်းစိမ်းပေါ်က လေယာဉ်ပြေးလမ်း၊ ဒီဖက်မှာတော့ အခုမှ အသစ်စက်စက်ဆောက်ထားတဲ့ မြို့သစ် အိမ်ယာအကောင်းစားတွေ။ ဒီမှာက အိမ်မဆောက်ခင် ရေနဲ့ မိလာလုိုင်းတွေကုို အသေချာ အရင်လုပ်တယ်၊ ရန်ကုန်မှာ ဘယ်လုိုလုပ်လဲ မသိဘူး။ ရေကြီး-ရေလျှံ ပြသာနာ ခဏခဏတက်နေတယ်ဆုိုပြီး- မြို့ပြတည်ဆောက်ရေး အကြောင်းတောင် ကျနော်တုို့ ငြင်းခုန်လုိုက်ကြပါသေးတယ်။
ခရစ်စတန်စန်းကနေ စထွက်တော့ နေ့လည် တနာရီကျော်နေပြီ။ လမ်းတွေကကောင်းပေမယ့် နည်းနည်းတော့ ကျဉ်းတယ်လုို့ခံစားမိပါတယ်။ ဥရောပရဲ့ဟောလီးဒေးရာသီဆုိုတော့ ရုိုးရုိုးအိမ်စီးကားတွေအပြင် အိပ်ခန်းတွေ၊ မီးဖုိုချောင်တွေ အစုံပါတဲ့၊ ဟုိုတယ်မှာတည်းစရာမလုိုပဲ လနဲ့ချီခရီးသွားနုိုင်တဲ့ ဟုိုတယ်ကားလုို့ ခေါ်ရမလား... Camping Car ... တွေကလည်း လမ်းပေါ်မှာ မနည်းဘူး။ သူတုို့ကုိုရှောင်နေရင်းနဲ့ အချိန်တောင် နည်းနည်းနှေးနေရသလုိုမျိုး။
ရောက်ပါပြီ- ဟုိုမှာ လင်းဒက်နက်စ်- Lindesnes၊ နော်ဝေးရဲ့ တောင်ဖက်အစွန်ဆုံးနေရာ။ ထားဝယ်မှာနေပြီး တောင်ဖက်စွန်း ကော့သောင်းကုို မရောက်ဖူးသေးပေမယ့် နော်ဝေ တောင်ဖက်အစွန်းဆုံးကိုတော့ ရောက်ဖူးသွားပြီပေါ့။ ကျွန်းစွယ်အငူတွေ၊ ရေလက်ကြားလေးတွေနဲ့ ကျဉ်းမြောင်းလမ်းတွေကို အတန်ငယ်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက် wow ဆုိုပြီး လင်းဒက်နက်စ်ကုို တွေ့လုိုက်ရပါတယ်။ ကားတွေများလွန်းလုို့ ကားပါကင်အပြင် လမ်းမတွေဘေးမှာတောင် ကားတွေက မနည်းဘူး။
တောင်ဖက်စွန်း အငူဆုိုတော့ လေက တုိုက်သလား မမေးနဲ့။ ကားပါကင်ရဲ့ ဒီဖက်မှာ ကျောက်တောင်ကြီးတလုံး၊ ဟုိုဖက်မှာတော့ မီးပြတုိုက်တခုနဲ့ ပြတုိုက်တွေရှိတဲ့ Lindesnes ရဲ့ အဓိကနေရာပေါ့။ ၀င်ကြေးက တယောက် ၁၀၀ ခရုိုနာဆုိုတော့ နည်းနည်းတော့ ဖျားသွားတယ်။ အော်စလုိုမှာတော့ ပြတုိုက်အတော်များများက ခရုိုနာ ၇၀ ၀န်းကျင် (ဒေါ်လာ ၁၀ ၀န်းကျင်) ပဲပေး ရလေ့ရှိပါတယ်။
ရောက်လာပြီးမှတော့ ဈေးကြီးလုို့ဆုိုပြီး ဘယ်လှည့်ပြန်လုို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ ဆက်လှော်ပေါ့။ တောင်က အတော်တက်ရသား။ ထုိုင်း နယ်စပ် တောထဲကတောင်တွေလုို ဗွက်တွေနဲ့ ချောနေတာမျုိုးမဟုတ်လုို့ တော်သေးတယ်။ ကျောက်လှေကားထစ်တွေ စနစ်တကျ လုပ်ပေးထားပါတယ်။ မီးပြတုိုက်ဆုိုပေမယ့် ခံတပ်သဘောမျိုးလည်း ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ နော်ဝေဟာလည်း ဒုတိယ ကဘာစစ်တုန်းက ဟစ်တလာ ဒဏ်ကုို အတော်ခံခဲ့ရတဲ့နေရာပေါ့။ ဆိပ်ကမ်းမြို့အတော်များများရဲ့ အဓိကနေရာတွေမှာ ခံတပ်ဟောင်းတွေ ရှိနေခြင်းက ဒါကုို သက်သေပြနေတာပေါ့။
တောင်ထိပ်က မီးပြတုိုက်က သိပ်မမြင့်ပေမယ့် ၀ါရံတာထွက်ပြီး ဓာတ်ပုံရုိုက်တဲ့အခါ နည်းနည်းတော့ ကြောက်မိသလုိုလုို။ ကုိုယ်ကသာကြောက်နေတာ ဆယ်ကျော်သက်တွေက ဆယ်ဖီအဆွဲမပျက်။ ဟုိုဖက်မှာ ပင်လယ်ပြာပြာကြီးက တမျော်တခေါ်။ ကော့သောင်လုို ထုိုင်းဖက်ကမ်းနဲ့ ခပ်နီးနီးမဟုတ်။ အနီးဆုံး ဒိန်းမတ်နဲ့တောင် ၃ နာရီကျော်သဘောင်္ခရီးဆုိုတော့ ဟုိုဖက်မှာ ရေပြင်ကလွဲပြီး ဘာမှမမြင်နုိုင်။ နော်ဝေတွေရဲ့ သဘာဝချစ်တဲ့ ထုံးစံအတုိုင်း ဒီလောက်မြင့်တဲ့နေရာမှာလည်း ခြံစည်းရုံးကာမထားပဲ ဒီတုိုင်းပဲ ထားပေးထားပါတယ်။
အဲလုို ဘာအကာအရံမှ မရှိတဲ့ကျောက်ဆောင်ပေါ်မှာ ရုိုးရုိုးဆယ်ဖီဆွဲသူတွေအပြင် ခုန်ပျံပြီး ဆယ်ဖီဆွဲသူ၊ ဓာတ်ပုံ ရုိုက်နေသူတွေကလည်း မနည်းလှပါဘူး။ ကုိုယ်တွေလည်း ရသမျှအချိန်တွင်း ဓာတ်ပုံတွေရုိုက်ပြီးတဲ့နောက် ၅ နာရီလောက်မှာ တောင်ပေါ်က ပြန်ဆင်းလာပါတယ်။ တောင်ပေါ်ကမဆင်းခင် သတိရတုန်း ပြောချင်တာက ခရီး တွေလျောက်သွားရင်းနဲ့ ကွန်ဗစ်ဖြစ်နေတယ်ဆုိုတာကုိုတောင် ခပ်မေ့မေ့။
မေ့ဆုို ဒီကလူတွေက ဘယ်သူမှ နှာခေါင်းစည်းတပ်မထားပါဘူး။ ကျနော်တုို့အုပ်စုထဲက ကင်ဆာရောဂါအခံရှိတဲ့ ရဲဘော်ဒေါင်းတယောက်ပဲ အများကြားမှာ နှာခေါင်းစည်းနဲ့ ထူးထူးခြားခြားနေသလုို။ ဒါပေမယ့် ဒီကလူတွေက တခြားစည်းကမ်းတွေကိုတော့ အတော်လုိုက်နာကြပါတယ်။ ဈေးဝယ်စင်တာတွေ၊ အခုလုို လူစည်ကားတဲ့နေရာ တွေမှာ တယောက်နဲ့တယောက် တမီတာ ခွာနေရမယ်ဆုိုတာမျိုး၊ လမ်းတလျောက် ဓာတ်ဆီဆုိုင်ဝင်တုိုင်း အိမ်သာ တန်းစီတာတောင် တမီတာကွာအောင်စီနေတဲ့လူတွေ၊ အံ့သြပါ့။ ကုိုယ်တွေက မအောင့်နုိုင်လုို့ တမီတာ ကွာ မကွာတောင် သတိမထားမိပါဘူး။
ပြီးတော့ ဈေးဆုိုင်တွေဝင်ရင် လက်ဆေးဖုို့ Hand Gels တွေထားပေးထားပါတယ်။ အများပြည်သူဆိုင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ ဘတ်စ်ကား၊ ရထားစီးမယ်ဆုိုရင် တယောက်နဲ့တယောက် တခုံစီခြားပြီးထုိုင်ရပါတယ်။ လက်ဆွဲနှုတ်မှုအစား တဒေါင်ဆင့်ချင်း ထိပြီးနှုတ်ဆက်တာမျိုးလုပ်ရပါတယ်။ ထူးတာကတော့ ဒီက ကလေးတွေက ဒီစည်းကမ်းတွေကို ပုိုလုိုက်နာနေတာတွေ့ရပြီး လူကြီးတွေမလုိုက်နာရင်တောင် ကလေးတွေက ပြန်သတိပေးနေတာ လမ်းတလျောက်မှာ မြင်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ (အခု ဟောလီးဒေးရာသီနောက်ပုိုင်းမှာတော့ နော်ဝေမှာလည်း စည်းကမ်းတွေကုို နည်းနည်း ပြန်တင်းကျပ်လာမဲ့ သဘောမျိုး တွေ့နေရပါတယ်)။
အင်း... တောင်ပေါ်ကပြန်ဆင်းတော့ ၅ နာရီကျော်နေပြီ။ နေသာနေတော့ ၅ နာရီမှန်း သတိမထားမိပါဘူး။ နော်ဝေမှာက နွေရာသီဆုိုရင် ည ၁၀ နာရီလောက်မှ နေ၀င်တာမျိုး။ ဒါက အခုရောက်နေတဲ့ တောင်ပုိုင်းကုိုပြောတာ၊ မြောက်ပုိုင်းဆုိုရင် နေတောင် မ၀င်တော့ပါဘူး။ ( နေမ၀င်ညတွေအကြောင်းကုို မြောက်ပုိုင်း ခရီးစဉ်မှာ ဆက်လက်တင်ပြပါ့မယ်)။
အုံးမလီက လူတွေကုို ညနေ ၇ နာရီလောက်ရောမယ်ပြောထားတော့ ခပ်သွက်သွက်မောင်းရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လေယာဉ်မှ မဟုတ်တာ။ ကုိုယ်လုိုပဲ အရင်လုိုပြီးမောင်းနေသူတွေက လမ်းပေါ်မှာအများကြီးဆုိုတော့ ဖြေးဖြေးပေါ့။ ခရစ်စတန်စန်းကုို ခဏပြန်ဝင်။ ဒိန်းမတ်ကပြန်လာသူတွေကုို ဆိပ်ကမ်းမှာကြုိုဆုိုပြီး သူတုို့ဆီက ပုလင်းတွေယူရပါသေးတယ်။ နော်ဝေမှာက အရာရာဈေးကြီးပြီး အရက်နဲ့ ဆေးလိပ်ကတော့ အဆုိုးဆုိုးပေါ့။ ဒိန်းမတ်တုို့ ဆွီဒင်တုို့မှာ ၁၀၀ ခရုိုနာလောက်သာပေးရတာကုို နော်ဝေမှာ ၂၀၀ ကျော်ပေးရလေ့ရှိပါတယ်။
အဲဒီ ဒိန်းမတ်က ပြန်လာသူတွေကုိုစောင့်နေရင်းနဲ့ အချိန်နည်းနည်းရလုို့ ခရစ်စတန်းဆိပ်ကမ်းအနီးက ခံတပ်တောင်တန်း Kanonmuseum ပေါ် တက်လယ်လုိုက်ပါသေးတယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်တုန်းက နာဇီတွေကို အဓိက ခုခံတဲ့နေရာတခုပေါ့။ ညနေ ၇ နာရီဆုိုတော့ ပြတုိုက်ကပိတ်သွားပြီဖြစ်လုို့ ပြတုိုက်ထဲ ကြည့်ခွင့်မရတော့ပါ။ ပြတုိုက်အပေါ်တည့်တည့်က ဧရာမ အမြောက်ကြီးနဲ့ ခံတပ်ဟောင်းနေရာတွေကိုပဲ ကြည့်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
(ဓာတ်ပုံ- Kristiansand Kanonmuseum)
ဒီနေရာကနေ ပင်လယ်ကုိုကြည့်ရတဲ့မြင်ကွင်းကလည်း ခုနကသွားခဲ့တဲ့ တောင်ဖက်စွန်း Lindesnes နေရာက ကြည့်ရသလုိုမျိုး စိမ်းလဲ့နေတဲ့ ပင်လယ်ပြာပြာကုို မြင်နေရပါတယ်။ ကွာတာဆုိုလုို့ ရှေ့နားမှာ ကျွန်းငယ် နှစ်ခုရှိတာ၊ ဒိန်းမတ်ဖက်သွားတဲ့ သဘောင်္အပါဝင် ပင်လယ်ထဲမှာ သဘောင်္တွေ သွာလာလှုပ်ရှားနေတာတွေပဲရှိပါတယ်။ အဲ. အထူးခြားဆုံးကတော့ ဧရာမ အမြောက်ကြီးပါပဲ။ ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်ပြီး ပစ်နုိုင်တဲ့ ဒီအမြောက်က မြင်ဖူးသလောက်ထဲမှာတော့ အကြီးဆုံးအမြောက်ပါပဲ။ အဲဒီအမြောက်ကြီးနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ခရစ်စတန်ဆန်းကနေ ပြန်ထွက်လာခဲ့ ပေါ့။
အုန်းမလီ (Ámli) မှာ ခဏတာ
ဒီလုိုနဲ့ ရန်ကုန်တော့ဖြေးဖြေးဆိုပြီးလုပ်လုိုက်တာ အုံးမလီရောက်တော့ ည ၉ နာရီရှိနေပြီ။ မြို့ငယ်လေးဆိုတာ့ လမ်းတွေက ခရစ်စတန်စန်းလောက်မကောင်းဘူး။ ထင်းရူးပင်တွေကြားက အကွေ့အကောက်လမ်းတွေ၊ တောင်တန်းတွေနဲ့ ရေကန်လေးတွေက အတော်ကုို သာယာလှပပါတယ်။ ကျနော်တုို့တည်းမယ့် ရဲဘော်ကြီး မူးကတိ (သူပုန်ကျောင်းသား စာအုပ်ထဲက မာနယ်ပလောရှိ KNU အတွင်းရေးမှုးချုပ် ဘဒုိုဘသင်အိမ်က ဆရာကြီး) အိမ်က ဧရာမတောင်နံရံကြီးတခုနဲ့ နီးနီးလေးရယ်၊ ဘေးမှာက သဘာဝချောင်းလေးနဲ့ဆုိုတော့ မာနယ်ပလောကုိုများ ပြန်ရောက်သွားသလားလုို့ ခံစားမိ။
တွေ့တဲ့သူ အားလုံးနီးပါးကလည်း ကရင်လုို ပြောနေကြတယ် မဟုတ်ပါလား။ ပြီးတော့ ကွမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့။ နော်ဝေမှာ နှစ် ၂၀ နီးပါးနေလာတောင်တောင် ကွမ်းမပြတ်ကြသေး။ မပြတ်ဆုို ဒီက အေးရှားဆုိုင်တွေမှာ ကွမ်းသီး၊ ကွမ်းရွက် အစုံရတယ်တဲ့။ ထုံးပဲ နည်းနည်းရှာရခက်တယ်လို့ ၀ါရင့် ကွမ်းစားသူတွေကပြောပါတယ်။ အင်း- ကုိုယ်လည်း ကွမ်းတယာလောက်တော့ ၀ါးလုိုက်အူးမှ...၊ တောထဲကနေ ဘန်ကောက်ရောက်ချိန်မှာ ကွမ်းချေးကပ်နေတဲ့သွားတွေကုို အသဲအသန် ခြစ်ပေးထားတဲ့ ဘန်ကောက်က သွားဆရာဝန်မလေးကုိုတောင် ပြန်သတိရမိ။
အော်စလုိုက အခန်းကျဉ်းတွေမှာ နေလာဖူးသူတွေအတွက်တော့ အုံးမလီက အိမ်တွေက အကြီးကြီး။ ကွင်းပြင်ကျယ်၊ မြက်ခင်း ကျယ်တွေနဲ့။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တောင် စိုက်ထားသေး။ နယ်စပ်စခန်းကုို ရောက်သွားသလုိုပါပဲ။ ပြီးတော့ သူ့အိမ်ရှေ့ ကားဂုိုဒေါင်ဘေးက ထင်းရှုးပင် ၂ ပင်ကြား ပုခက်ချည်ထားတာတွေ့လုို့ တောတွင်းဘ၀ အလွမ်းပြေ ခနတက်အိပ်လုိုက်သေးပေါ့။ (တောတွင်းပုခက်တွေက နော်ဝေပုခက်တွေလုို မကောင်းပေမယ့် တော တွင်းမှာတော့ အခုထိ အသုံးဝင်ဆဲ)
အိမ်ပေါ်လူစုံတုန်း မနက်ဖန် ဘယ်နေရာ သွားလယ်ရင်ကောင်းမလဲ ဆွေးနွေးတော့... တောင် တက်မလား- ငါးမျှားမလားတဲ့၊ မူးကတိက အဆုိုပြုပါတယ်။ ဒီဒေသက ချောင်းတွေမှာ ငါးအတော်ရတယ်လုို့ သတင်းကြီးနေတော့ အဲဒီညက ငါးကင်နဲ့ အပီဆွဲပေါ့။
နော်ဝေလုို ဘယ်လုိုခေါ်လဲတော့ မသိဘူး။ ကွန်မန်ဒုို ငါးလုို့ မူးကတိ အမည်ပေးထားတဲ့ ငါးကတော့ ဆူးတောင်ပံတွေပါပြီး အသားက စားလုို့ကောင်းလုိုက်တာ လက်ကုန်ပဲ...။ ဘာလုို့ ကွန်မန်ဒုိုငါး ခေါ်လဲဆုိုပြီးမေးကြည့်တော့ ဒီကောင်တွေကို မျှားရတာ မလွယ်ဘူး။ တခါတလေ ငါးမျှားကြိုးပြတ်သွားတဲ့အထိ အဲဒီငါးက ရုန်ုးကန်တုိုက်ခုိုက်တယ်၊ တုိုက်ခုိုက်ရေး အားကောင်းလုို့ ကွန်မန်ဒုိုဆုိုပြီး အမည်ပေးထားတာတဲ့။
အင်း- ကုိုယ်ကလည်း ထားဝယ်သားသာဆုိုတယ် ငါအကြောင်း ဘာမှသိတာမဟုတ်။ ငါးလိပ်ကျောက်နဲ့ တခြားငါးတွေ မတူတာလောက်ပဲသိပြီး ပုံစံချင်းခပ်ဆင်ဆင်ငါးတွေဆုို မခွဲတတ်တော့ပါဘူး။ ဒီကလူတွေအတော်များများ ငါးမျှားရတဲ့အတွေ့အကြုံကုို အရူးအမူးကြိုက်နေကြပေမယ့် ကုိုယ်က အခုထိ ငါးတခါမှ မမျှားဖူးသေး။ ငါးကော ဖမ်းဖူးလားဆုိုတော့ အင်း...တခါမှမဖမ်းဖူးဘူး။ ငါးနဲ့ပတ်သက်လုို့ ငါးဖမ်းလှေတွေကို အခွန်ကောက်တာတော့ လုပ်ခဲ့ဖူးပေါ့။
ကွန်မန်ဒုိုငါးကင်အပြင် တာလပေါ့ ဟင်းချိုကလည်း ပါလုိုက်သေးဆုိုတော့ မာနယ်ပလောကုို သတိမရပဲနေပါ့မလား။ တာလပေါ့ ဆုိုလုို့ ဒီမှာချက်တဲ့ တာလပေါ့က အတော်စားလုို့ကောင်းတာ။ မာနယ်ပလောမှာ တခါစားဖူးတာနဲ့ တခြားစီ။ ဟုိုက တောထဲမှာ ဖြစ်သလုိုချက်ထားတဲ့ တာလပေါ့ ကုို ကုိုယ်က ပထမ ဆုံးအကြိမ်စားဖူးပြီး တာလပေါ့ ဟင်းက မစွန်ပါဘူးဆုိုပြီးမှတ်ထားလုိုက်တာ။...အခု တာလပေါ့ ကျတော့ ကောင်းမှကောင်း။ လက်ကုန်ပဲ။
တောထဲမှာ စားဖူးတဲ့ တာလပေါ့ က ဆန်မုန့်ရယ်၊ ဟင်းနုနယ်ရွက်ရယ်ပဲ ပါတယ်ထင်။ အခုတော့ ငါးတွေ၊ တခြား လုိုအပ်တာတွေပါ အစုံထည့်ထားတော့ အခုတလော ရန်ကုန်ကဆုိုင်တွေမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ တောင်သူလယ် သမားဟင်းကုိုတောင် သွားသတိရမိ။
ကရင်ဟင်းတွေကောင်းရဲ့နဲ့ ရန်ကုန်မှာ ကရင်ထမင်းဆုိုင် မရှိတာဘာကြောင့်လဲ၊ ရှမ်း၊ ကိုးကန့် ဆုိုင်တွေ၊ ရခုိုင် မင်းလမ်းဆုိုင်တွေ၊ ကချင် စားသောက်ဆုိုင်တွေပဲများနေပြီး ကျန်တဲ့တုိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ စားသောက်ဆုိုင် ရန်ကုန်မှာမရှိသေးတာ ဘာကြောင့်လဲဆုိုပြီးလည်း မေးခွန်းထုတ်ဖြစ်ကြပါသေးတယ်။
ထမင်းစားရင်းနဲ့ သူ့အိမ်က ဒီဒေသမှာ ဧည့်သည်အများဆုံးလာတဲ့ အိမ်လုို့ မူးကတိကပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထမင်းနဲ့ ဟင်းကို အမြဲတန်း အပုိုချက်ထားရတယ်။ အခုလည်း ကျနော်တုို့ ၂ ဦးအပြင် မြောက်ပုိုင်းကနေ လာလယ်တဲ့ ကရင်တုိုင်းရင်းသား ဧည့်သည်တွေလည်း သူ့အိမ်မှာရှိနေပါတယ်။ ပြီးတော့ အနီးအနားဝန်းကျင်က လာသူတွေ၊ ဘုရားကျောင်းအတွက် လာသူတွေနဲ့ စည်စည်ကားကားဆုိုတော့ နော်ဝေကုိုရောက်နေတာနဲ့ မတူပဲ နယ်စပ် က ကရင်ရွာကြီးတရွာကုို ပြန်ရောက်နေတဲ့ ခံစားချက်မျုိုး စိတ်ထဲ ပြန်ပေါ်လာပါတယ်။
ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရာ ရေကာတာများဆီသုို့...
နောက်တနေ့ မနက်စာ စာပြီးချိန်မှာတော့ ဒီဒေသက ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်တဲ့နေရာတခုကုို လုိုက်ပြမယ်ဆုိုပြီး အိမ်ရှင်က အဆိုပြုပါတယ်။ ခုနက မြောက်ပုိုင်းက ဧည့်သည်တွေပါ ပါတဲ့အတွက် ကား ၂ စီးနဲ့ နေ့လည် တနာရီလောက်မှာ အုံးမလီကနေ မြောက်ဖက်ရှိ Bykle အရပ်ဆီ ချီတက်လာပါတယ်။ ဒီက ကားလမ်းတွေအတော်များများက ချောင်းရုိုးတလျောက်ဖောက်ထားတာကုို သတိထား မိပါတယ်။ တချို့နေရာတွေက ချောင်းလား၊ ရေကန်လား သိပ်မရှင်းလှ။ ရှည်မျောမျော ရေကန်တွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ရေကန်တခုနဲ့တခု ချိတ်မိပြီး ချောင်းဖြစ်သွားသလား မသိပါ။ သေချာကတော့ တော-တောင်-ရေ-မြေ သဘာဝဟာ အတော့်ကုို လှပနေပါတယ်။
အုံးမလီကနေ ကွေ့ကောက် ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ တောအုပ်ထဲက လမ်းကုို နာရီဝက်လောက် မောင်းပြီးတဲ့နောက် E9 လမ်းမကြီးကုို ရောက်ပါတယ်။ Bykle ဆီသွားတဲ့ အဲဒီလမ်းမကြီးတလျောက်မှာ ခုနကပြောတဲ့ ရေကန်တွေ၊ ချောင်းတွေ တလျောက်လုံးရှိနေပြီး တချို့နေရာတွေမှာဆုို ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ဖူးတဲ့ ဟုိုတယ်ကား- Camping Car တွေ ဒါဇင်နဲ့ချီပြီး စခန်းချထားတာတွေ့ ရပါတယ်။ သဘာဝတောတောင်လှပတဲ့နေရာ၊ ချောင်းစပ်လုို လှပတဲ့နေရာတွေမှာ စနစ်တကျဆောက်ထားတဲ့ မြေစုိုက် တဲ Hytter တွေကုိုတွေ့ရပြီး ခုနက ဟုိုတယ်ကားတွေက အဲဒီတဲနဲ့ ချိတ်ဆက် ရပ်နားလေ့ရှိပါတယ်။
Hytter ကုို မြန်မာလုို တဲ လုို့အလွယ် ဘာသာပြန်ပေမယ့် တကယ်က မြန်မာပြည်က တဲလုိုမျိုးတော့ မဟုတ်ပါ။ ဟုိုတယ်၊ မုိုတယ်တွေလုို ၀န်ဆောင်မှုမပါ၊ စားသောက်စရာမပါတဲ့ သာမန်တည်းခုိုဆောင်လုို့ ပြောသင့်ပါတယ်။ ဘန်ဂလုိုပုံစံ မြေစုိုက်ဆောက်ထားတဲ့ တဲတလုံးစီမှာ ကုတင်၊ (စောင်- ခေါင်းအုံး အကြမ်းထည်ပါ- ကုိုယ့်ဘာသာ အစွပ်ထည့်ပြီး အိပ်ရ) မီးဖုိုချောင်၊ အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်းပါ ပါတယ်။ တချို့အဆောင်တွေက အိပ်စရာ ကုတင်ပဲပါပြီး ရေချိုးခန်း- အိမ်သာကုို အများသုံးနေရာမှာ သွားသုံးရပါတယ်။ ဒီ ဟီတာတွေက ဟုိုတယ်၊ မုိုတယ်တွေလုို အမြဲတန်းဖွင့်ထားတာမဟုတ်ပဲ အခုလုို ဟောလီးဒေးရာသီမှာ ခုနက Camping Car နဲ့လာသူတွေ၊ ကုိုယ်ပုိုင်ကားနဲ့လာပြီး လမ်းကြုံလုို့ ၀င်တည်းသူတွေအတွက် အဓိကထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တချုို့နေရာတွေမှာတော့ နွေရာသီ၊ ဆောင်းရာသီမှာ ခဏတာနေထုိုင် အနားယူဖုို့အတွက် ကုိုယ်ပုိုင် ဟီတာ တွေ ဆောက်ထားတာကုိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဟီတာ အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ မူလ ခရီးစဉ်တောင် ဘယ်နားရောက်သွားမှန်း မသိ။ ခုနကပြောတဲ့ E9 လမ်းမအတုိုင်းမောင်း၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က ရေကန်တွေ၊ တဖက်က တောင်နံရံတွေ၊ ထင်းရှုးတောတွေကိုကြည့်၊ တခါတရံမှာ သိပ်လှတဲ့ ရေတခွန်တွေတွေ့ရင် ကားခနရပ်ပြီး ဓာတ်ပုံဆင်းရုိုက်၊ တနာရီလောက်ကြာတုိုင်း ပေါက်တောသွားပေါ့ (နော်ဝေက ဟုိုက်ဝေးလမ်း အားလုံးနီးပါးမှာ ၁၀ ကီလုိုလောက်သွားပြီးတုိုင်း ကားခဏရပ်ပြီး အနားယူနုိုင်ဖုို့ စားပွဲခုံကြမ်း ၃-၄ ခု၊ အိမ်သာတလုံးနဲ့ အမှိုက်ပုံးတွေ ထားပေး ထားတော့ မြန်မာပြည်မှာလုို တောတုိုးပြီး လမ်းဘေးမှာ ပေါက်တောသွားတာ ဒီမှာ တွေ့ရလေ့မရှိပါ)။
နေ့လည်ခင်း ၃ နာရီလောက်မှာတော့ ရေကာတာရှိတဲ့ Bykle မြို့နယ်ထဲ ရွာလေးတရွာဆီ ၀င်လာပြီး လမ်းကြားတခုထဲ အိမ်တလုံးရှေ့မှာ ကားရပ်လုိုက်ပါတယ်။ ခြံဝင်းထဲက သားသားနားနား လုံးချင်းအိမ်တလုံးကုို ဆေးသုတ်နေတဲ့ လူရွယ်နှစ်ဦးက ကျနော်တုို့ကုိုလှည့်ကြီးပြီး ကရင်ဘာသာနဲ့ တခုခုပြောလုိုက်ပါတယ်။ (စာရေးသူက အခုထိ ကရင်စကားကုို ၀ါလဲဂေး- ဟာလဲဂေး ထက် ပုိုမတတ်သေး)။ တကယ်က ကျနော်တုို့ရဲ့ ရဲဘော်ကြီး မူးကတိက ဒီကုို ထွက်မလာခင်ကတည်းက ဒီရွာမှာရှိတဲ့ သူ့မ်ိတ်ဆွေ ကရင်တုိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ကြိုပြောထားပြီးသားဆုိုတာကုို နောက်မှသိရပါတယ်။
ဆုိုလုိုတာက မြန်မာနုိုင်ငံကလာတဲ့ လူတွေရဲ့ ထုံးစံအတုိုင်း ဟောလီးဒေးသွားတာတောင် အနောက်တုိုင်းသားတွေလုို မြေပုံကြည့်ပြီး ဒီတုိုင်းသွားတာမဟုတ်ပဲ ရောက်လေရာအရပ်မှာ မိတ်ဆွေတွေကုို တွေ့ဆုံ စကားပြောဖုို့ကည်း အရေးကြီးသေးတယ် မဟုတ်ပါလား။ ခဏထုိုင် ရေနွေးကြမ်းသောက်ပြီးတဲ့နောက် ရှေ့မှာပြောထားတဲ့ လျှပ်စစ်ထုတ်တဲ့ ရေကာတာကုို သွားကြည့်ကြပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာလည်း တယောက်မှ မပါတော့ ရေကာတာ တည်ဆောက်ထားပုံ၊ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ပုံ အသေးစိပ်တော့ ဘယ်နားလည်ပါ့မလဲ၊
ရေကာတာ အမည်ကို Dam Sarvfossen လုို့ရေးထားတာတွေ့ရပြီး အမြင့် ၅၀ မီတာ၊ အကျယ် ၁၄၂ မီတာနဲ့ ဒီဒေသမှာ ရေအား လျှပ်စစ် အဓိကထုတ်တဲ့ နေရာဖြစ်တယ်လုို့သိရပါတယ်။ နော်ဝေမှာ တောင်ပေါ်ရေကန်တွေ၊ ချောင်းတွေ၊ မြစ်တွေ အတော်များတဲ့အတွက် နေရာအတော်များများမှာ သက်ဆုိုင်ရာဒေသအလုိုက် ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာနုိုင်ငံမှာလည်း ဒီလုို ကန်တွေ၊ ချောင်းတွေပေါတဲ့အတွက် နော်ဝေလုို ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်နုိုင်မလားဆုိုပြီး အရင်သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန် နော်ဝေရောက်စဉ်က ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံအတော်များများကုို သွားရောက်လေ့လာခဲ့သေးတယ်လုို့ သတင်းတွေထဲ ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီလုို လေ့လာပြီး လက်တွေ့ ဘယ်လောက်လုပ်ဖြစ်မှန်းတော့မသိ၊ အခုထိတော့ မြန်မာနုိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်မီးက မကြာခန ပြတ်နေဆဲဖြစ်တဲ့အကြောင်း အဲဒီရေကာတာကြီးပေါ်ထုိုင်ပြီး ကျနော်တုို့ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အပြန်လမ်းမှာတော့ ရေကန်တွေ၊ အပန်းဖြေတဲ့နေရာတွေ၊ မြင်မားတဲ့ တောင်နံရံတွေကို လျောက်ကြည့်ပြီး ခုနက ဒေသခံရဲ့ နေအိမ်မှာ ညစာ အားပေးခဲ့ပေါ့။
ကျောက်ညှပ်တောင် Kjeragbolten သုို့...
နောက်တနေ့မနက်ကျတော့ ရာသီဥတုက သိပ်မကောင်း၊ ဒါဖြင့် အော်စလုိုကုို ပြန်မလား- ဘယ်ကုို ဆက်သွားမလဲပေါ့။ နွေရာသီဟောလီးဒေးထွက်လာတာ ၂ ရက်တည်းနဲ့ အိမ်ပြန်ရင်လည်း မဟုတ်သေးဘူးဆုိုပြီး ဆွေးနွေးရင်း မနေ့က သွားခဲ့တဲ့နေရာနဲ့ သိပ်မဝေးတော့တဲ့အရပ်မှာ နုိုင်ငံခြားသားတွေ အုပ်စုလိုက်သွားလယ်လေ့ရှိတဲ့ ကျောက်ညှပ်တောင် Kjeragbolten ရှိတယ်လို့ မူးကတိကပြောပါတယ်။ ''ဟာ.. ဟုတ်လား- မနေ့က ဘာလုို့မပြောလဲ'' ဆုိုတော့ ခင်ဗျားတုို့ သွားချင်မှန်း မသိလုို့တဲ့။
သေပြီဆရာ။ မြန်မာခရီးသွားတွေရဲ့ အားနည်းချက်က အဲဒါပဲ။ လုိုက်ပုို့ပေးတဲ့လူ ရှိတယ်ဆုိုပြီး သွားမယ့်နေရာကို ကြုိုတင် လေ့လာထားခြင်းမရှိ။ တကယ်ဆုို အဲဒီနေရာကိုသွားချင်နေတာကြာပြီ၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီကျောက်ညှပ်တောင်က ဒီဖက်မှာမဟုတ်၊ ကျောက်ဖျာကြီး (preikestolen) ရှိတဲ့မြို့ စတဘန်ငါ (Stavanger) မြို့ဖက်မှာလုို့ပဲ ကုိုယ်က သိထားတာ။ အခု မြေပုံပေါ် ပြန်ရှာကြည့်တော့မှ မနေ့က ရောက်ခဲ့တဲ့ နေရာနဲ့ စတန်ဗန်ငါးကြားမှာ ဒီ ကျောက်တောင်က ရှိနေတာ။ တောင်ခြေရှိ Lysebotn ဆုိုတဲ့ ရေလက်ကြား (Fjord) ကနေ သဘောင်္စီးသွားရင် ခုနက ကျောက်ဖျာ (preikestolen) ဘေးကနေဖြတ်ပြီး စတန်ဗန်ငါး အထိရောက်တယ်တဲ့...။
"ရာသီဥတုမကောင်းလဲ သွားမယ်ကွာ၊ ဟုိုရောက်လုို့ တောင်ပေါ်တက်ခွင့်မရလည်း မတက်နုိုင်ဘူး။ ဒီနေ့ အဲဒီနေရာကုို ပြန်မောင်း" ဆိုပြီး ရဲဘော်ကြီးမူးကတိကုို အတင်းအပူကပ်ရပါတယ်။ ရဲဘော်ဒေါင်းကလည်း ရအောင်သွားမယ်။ ကင်ဆာရောဂါခံစားနေရပေမယ့် အဲဒီတောင်ကုို ရအောင်တက်မယ်တဲ့။ ကဲ… မုိုးဖွဲဖွဲလေးထဲ မနေ့ကလမ်းအတုိုင်း ထပ်ထွက်လာပြန်ပေါ့။ ဒီတကြိမ်တော့ တခြားလူတွေမပါတော့ဘူး။ ရဲဘော် ၃ ကျိပ်တည်း။
နှစ်ခါမောင်းထားတဲ့လမ်းဆုိုတော့ အလွတ်နီးပါးတောင်မှတ်မိနေပြီ။ မနေ့ကသွားခဲ့တဲ့ E9 လမ်းအတုိုင်း ၂ နာရီနီးပါးမောင်းပြီးတော့ Rysstad ဆုိုတဲ့ လမ်းခွဲမြို့လေးကုို ရောက်ပါတယ်။ အဲဒီကမှ လမ်းကျဉ်းလေးအတုိုင်းလုိုက်။ ခုနက အုံးမလီမှာ လမ်းကျဉ်းပြီး အကွေ့အကောက်များတယ်ဆုိုတာ ဒီနေရာကုို ဘယ်မီမလဲ။ တချို့နေရာတွေဆုို ကားတစီးစာပဲရှိလုို့ ကီလုိုဝက်နီးပါးတုိုင်း ကားနှစ်စီးလွဲလုို့ရအောင် နေရာကျယ်လေးတွေ ဖန်တီးပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ကားသမားတွေအတွက် ပုိုကောင်းတာက ဒီအရပ်မှာ တောင်ပေါ်နည်းနည်းတက်လာတာနဲ့ ထင်းရှုးပင်တွေမရှိတော့ပဲ တောင်ကတုန်းတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဟုိုး အဝေးက လာတဲ့ကားကုို လှမ်းမြင်နေနုိုင်ပါတယ်။
တောင်ကတုံးနဲ့ ထင်းရှုးပင်ဆုိုလုို့ ဒီနေရာက မြန်မာနုိုင်ငံနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသလားမသိပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆုိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ချင်းတောင်ဖက် သွားလယ်စဉ်က တောင်အမြင့်ရောက်ရင် ထင်းရှုးပင်တွေကုိုတွေ့ရပြီး အနိမ့်ပုိုင်းရောက်ရင် အညာမှာပေါက်တဲ့ အပင်တွေ၊ ပြည်မက အပင်တွေကုိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီမှာက ပြောင်းပြန်။ မြေပြန့်မှာ ထင်းရှုးပင်တွေတွေ့ရပြီး တောင်လည်း နည်းနည်းမြင့်လာ၊ အထူးသဖြင့် ကျောက်တောင်တွေဆီရောက်လာတဲ့အခါ ဘာသစ်ပင်မှ မရှိတော့ပါ။ မြက်ခင်းတွေ၊ မြက်ထက် နည်းနည်းပုိုရှည်တဲ့ အပင်ပုညက်ညက်လေးတွေကုိုသာ တွေ့ရပါတယ်။
Kjeragbolten ကျောက်ညှပ်တောင်နား နီးလေ တောင်ကမြင့်ပြီး လေကတုိုက်လေ၊ လမ်းကကျဉ်းတဲ့အပြင် အကွေ့အကောက်တွေကလည်း ပုိုများလာပါတယ်။ တချို့တောင်ထိပ်တွေမှာဆုို ရေခဲတွေက ရှိနေတုန်း။ ဒီမှာက မြန်မာပြည်လုို ကားတွေက ဟွန်းတီးတာမဟုတ်တော့ ဟုိုဖက်မှာ အကွေ့မှာ ကားလာနေမှန်း ကြုိုမသိနုိုင်။ ဒီကြားထဲ အဝေးပြေး မော်တော်ဆုိုင်ကြီးတွေက တခါတရံ့ ၀ုိုး ကနည်းပေါ်လာတတ်ပါသေးတယ်။ ဒီလုို အကွေ့အကောက်တွေများတာကုိုရှောင်မောင်ရင်းနဲ့ Kjeragbolten တောင်ခြေစခန်းက ကော်ဖီဆို်င်ကုိုတောင် သတိမထားမိပဲ ဟုိုး တောင်အောက်က Lysebotn Fjord (အလင်းရောင်ကျောက် ရေလက်ကြား) အထိ ကားကုို မောင်းသွားမိကြပါတယ်။
အကွေ့အကောက်တွေကတော့ တကယ့်စူပါ။ ခြောက်ထမ်းလမ်းတွေ၊ ခုနှစ်ထပ်လမ်းတွေ ငုိုသွားမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆုို အဲဒီ တောင်ခြေကော်ဖီဆုိုင်ကနေ ရေလက်ကြားရှိတဲ့ ကမ်းစပ်အကြား လမ်းအကွေ့ပေါင်း ၂၇ ခုရှိလုို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအကွေ့တွေ အားလုံးက တကယ့်ကုို တဒေါင့်ဆင့်ကွေ့တွေဆုိုတော့ ကားမောင်းမကျွမ်းရင်၊ ကားသမားတွေ လမ်းစည်းကမ်းကုို စနစ်တကျ မလုိုက်နာရင် အတော်ဒုက္ခဖြစ်မယ့် လမ်းမျိုးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲလုို တောင်ခြေကုိုကျော်ပြီး ကမ်းနားအထိ လမ်းမှားသွားခြင်းကိုက ကံကောင်းခြင်းတခုပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆုို ဒီကျောက်ညှပ်ဆီရောက်ဖူးသူ အတော်များများ အခု ကျနော်တုို့ရောက်ခဲ့တဲ့ ရေလက်ကြားရှိတဲ့ ကမ်းခြေအထိ ဘယ်သူမှ မရောက်ဖူးခဲကြလုို့ပါ။
အဲ… ရေလက်ကြားနားအထိရောက်တာ ကံကောင်းတယ်ဆုိုပေမယ့် အခု တောင်ခြေပြန်ရောက်ပြီး Kjeragbolten ကျောက်ညှပ်တောင် ကုို တက်မယ်ဆုိုပါမှ ဒီနေ့မုိုးတွေရွာ၊ မြူတွေဆုိုင်း၊ လမ်းတွေချော်နေလုို့ တက်ခွင်မပြုနုိုင်ဘူးတဲ့...တောင်ခြေရှိ အစောင့် တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ သေပြီဆရာပဲ။ ဒီအထိ လာပြီးမှ တောင်မတက်ပဲ လှည့်ပြန်ရမလား...။ မဖြစ်သေးပါဘူး။ နည်းလမ်း ရှာဦးမှဆုိုပြီး တောင်ပေါ်က ဆင်းလာသူတွေကို မေးကြည့်ရပါတယ်။
ဒီလူတွေက မနက်အစောကြီးကတည်းက တက်သွားတာတဲ့။ ကံက ဆုိုးချင်တော့ မနက်ပုိုင်းတုန်းက ရာသီဥတု နည်းနည်း ကောင်းနေသေးပြီး အခု နေ့လည်ပုိုင်းကျမှ မုိုးရွာ၊ မြူဆုိုင်ပြီး တောင်ထိပ်ကုိုမပြောနဲ့ ရှေ့ မီတာ ၁၀၀ လောက်ကုိုတောင် မမြင်နုိုင်တဲ့အထိ အခြေအနေက ချက်ချင်းကြီးပြောင်းသွားပါတယ်။ တောင်ပေါ်က ပြန်ဆင်းလာတဲ့ ၄-၅ ဦးအုပ်စုက တကယ့် တောင်တက်ဝတ်စုံတွေ ကျောပုိုးအိတ်တွေနဲ့။ ကျနော်တုို့ ပုံတွေ၊ ၀တ်ထားတဲ့ ၀တ်စုံနဲ့ဖိနပ်တွေကို ကြည့်ပြီး မင်းတုို့ပုံစံနဲ့ဖြစ်ပါ့မလား လုို့ သူ့ပါးစပ်က ထုတ်မပြောပေမယ့် သူမျက်လုံးတွေမှာ အဲဒီအရိပ်အယောင်တွေကို မြင်နေရသလုိုလုို။
အတက် ၂ နာရီကျော်၊ အဆင်း ၂ နာရီလောက်သွားရတယ်ဆုိုပေမယ့် တောင်ပေါ်တက်တဲ့လမ်းက ခုနကရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ စတန်ဖန်ငါးဖက်က ကျောက်ဖျာ (preikestolen) ကုို သွားတဲ့လမ်းလုိုမျိုး ကျောက်လှေကားထစ်တွေ လုပ်ပေးထားတာမျုိုးမရှိ။ တကယ့် သစ်ပင်တပင်မှမရှိတဲ့ ကျောက်ဖျာပေါ် ဒီတုိုင်း တက်ရမှာ။ ဒါကြောင့် တောင်တက်ဖိနပ်မပါရင် မတက်ပါနဲ့လုို့ တောင်ခြေက ဆုိုင်းဘုတ်မှာ သတိပေးရေးထားတာဖြစ်မယ်။
မုိုးကရွာ၊ မြူကဆုိုင်းဆုိုတော့ ကျောက်ဖျာပေါ် ဖိနပ်ချောနုိုင်တာပေါ့။ ပြီးတော့ တချို့နေရာတွေမှာ ကြိုးဆွဲပြီး တက်ရတယ်တဲ့။ ဘယ်လုိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီ အထိလာပြီးမှတော့ ရောက်အောင်တက်မှ ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တောင်စောင့်လုံခြုံရေးတွေက လုံးဝ ခွင်မပြုပါ။ တက်ချင်ရင် မနက်ဖန်အထိစောင့်ပါ။ မနက်ဖန်နေသာတယ်၊ တက်ခွင့်ပေးမယ်တဲ့...။ အင်း အဲဒါမှ ဒုက္ခ။
မနက်ဖန်အထိ စောင့်မလား။ စောင့်မယ်ဆုို ခုနက လမ်းမှာပြီးရောက်သွားတဲ့ ဟုိုအောက်က ရေလက်ကြားအနီးကရွာရှိ ဟုိုတယ်တွေမှာ သွားအိပ်ရမှာ။ ဒီနားမှာ တည်းဖုို့-စားဖုို့ ကရင်အိမ်တွေ၊ ဗမာအိမ်တွေမရှိတော့ဘူးလုို့ပြောပြီး ၀ုိုင်းရယ်လုိုက်ကြပါသေးတယ်။ မနက်ဖန် တနင်္ဂနွေဆုိုပေမယ့် ရဲဘော်ကြီးမူးကတိက မအားဘူး။ ဘုရားကျောင်းကိစ္စတွေရှိသေးတယ်။ ကုိုယ်တုို့ ၂ ယောက်ကလည်း သူများပုို့ပေးမှ သွားနုိုင်သူတွေလုို ဖြစ်နေတော့ ဘာဆက်လုပ်မလဲ။ တညအိပ်စောင့်မလား- စိတ်လျော့ပြီး လှည့်ပြန်မလား...။
စိတ်လျော့ အူးလေး- ဒီတခါမရလည်း နောက်တကြိမ် ထပ်ကြိုးစားကြည့်ကြသေးတာပေါ့... လုို့ နှလုံးသွင်းပြီး ပြန်ဖုို့ ဆုံးဖြတ်လုိုက်ကြပါတယ်။ ဗုိုက်ကလည်း အတော်ဆာနေပြီဆုိုတော့ ဈေးကြီးလှတဲ့ တောင်ခြေက စားသောက်ဆုိုင်မှာ နော်ဝေ ညနေစာ ၀င်စားရင်း အဲထဲမှာ ပြထားတဲ့ တောင်ပေါ်က ဓာတ်ပုံတွေကုိုလေ့လာပေါ့။ အဲဒီက ထွက်လာပြီး ကားပေါ်တက်မယ်ပင်ြမှ... ဒီတုိုင်းတော့ ပြန်လုို့မဖြစ်သေး။ တောင်ပေါ်မရောက်လည်း တောင်အောက်မှာ နမူနာပြထားတဲ့ ကျောက်တုံးပုံနဲ့တော့ ဓာတ်ပုံရုိုက်အူးမှ ဆုိုပြီး ရသမျှ ရုိုက်ရတာပေါ့။
အင်း... သွားခဲ့သမျှခရီးစဉ်တွေထဲမှာ တောင်ခြေရောက်ပြီးမှ တောင်ပေါ်တက်ခွင့်မရလုို့ ပြန်လှည့်လာရတယ်ဆုိုတဲ့ ခရီးစဉ်ကတော့ ဒါ ပထမ ဆုံးပါပဲ။ အင်းလေ- လောကမှာ အားလုံးက ကုိုယ်တွက်ထားသလုို ကွက်တိဖြစ်နေရင် အဆင်မပြေမှုဆုိုတာ ဘယ်ရှိတော့မလဲ။
ဒီလုိုလည်း ပြောလုို့မဖြစ်သေး။ တကယ်က ခရီးတခုသွားမယ်ဆုိုရင် ကြိုတင်လေ့လာဖုို့၊ အထူးသဖြင့် အခုလုို ခရီးစဉ်မျိုးဆုိုရင် ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်ကို အသေချာကြည့်ပြီးမှ ထွက်လာသင့်တာပါ။ မုိုးရွာရင် တက်လုို့မရဘူး (ဆောင်းတွင်းကာလဆုိုရင် တောင်ပေါ်တက်တာအပြင် အခုလာခဲ့တဲ့ လမ်းတွေအားလုံး ပိတ်ထားပါတယ်) ဆုိုတာကို သိရဲ့သားနဲ့ ရာသီဥတုကုို အသေချာမကြည့်ပဲ ဟုိုရောက်မှ ကြည့်လုပ်ကြတာပေါ့ဆုိုတဲ့ ခပ်လွယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကုိုသာ အပြစ်တင်သင့်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်ဖြစ် တောင်ပေါ်မရောက်ပေမယ့် ဒီတောင်ဆီ ဘယ်လုိုလာရမယ်ဆုိုတာ လမ်းတော့ သိသွားတာပေါ့။ ဟုိုနား ဒီနား မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာတွေလည်း ရောက်ခဲ့တာပေါ့။ အရှုံးတော့မရှိပါဘူးလုို့ ကုိုယ့်ဘာသာအားပေးရင်း Kjeragbolten ကျောက်ညှပ်တောင် …တောင်ခြေကနေ အောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာလာခဲ့ရပေါ့...။ ဆောင်းမ၀င်ခင် နောက်တခါ ထပ်ကြိုးစားကြည့်ကြသေးတာပေါ့... Kjeragbolten ကျောက်ညှပ်တောင်ရယ်။. ။
(မြောက်ပုိုင်း North Cape ခရီးစဉ်အကြောင်း ရှေ့တပတ် ဆက်လက်တင်ပြပါမည်)။